Ketrika sy kandra: hetsika telo andro hahafantarana ny tontolon’ny asa sy ny asa mety amin’ny olona iray - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Homena telo andro ireo tanora sy ireo izay liana amin’ny sehatry ny asa na te hampivoatra ny fiainany arak’asa. Zavatra maro arak’asa no hita mandritra ny hetsika eny Ampefiloha ity araka nambaran’ireo mpikarakara. Entina hanatsarana ny fahaiza-manao efa ananana, ahafahany miditra sy miatrika amin’ny fomba mahomby amin’ny sehatry ny asa sy fandraharahana tiana hatao sy mifanaraka amin’ny tenany.
Isan’ny mampiavaka ity hetsika ity ny fisian’ny tranoheva manokana ahafahan’ireo mpitsidika mahafantatra bebe kokoa ny mombamomba ny tenany (profil) sy ny sehatr’asa mifanaraka aminy amin’ny alalàn’ny fitsapana kely (test d’orientation). Hisy ihany koa tranoheva hampiseho ireo karazana asa sy sehatr’asa isan-karazany, taovolo sy tarehy, asa tanana, sakafo sy mofomamy, fanamboarana sy fikojakojana fiara sy ny maro hafa izay mahaliana ny tanora amin’izao fotoana.
Ahitana fampiharana asa ihany koa mandritra ny hetsika, toy ny zaitra, mofomamy asa tanana…
Misy fifampizarana traikefa ahafahana mampihatra ilay asa mihitsy. Ahafantarana ny fahafehezan’ny tena ilay asa. Eo ihany koa ireo famelabelaran-kevitra iarahana amin’ireo manam-pahaizana amin’ny sehatra ny asa. Ny hanampiana an’ireo izay vonona hiditra amin’ny asa no antony nanaovana izao hetsika izao araka ny nambaran’ireo mpikarakara.
Efa betsaka ireo hetsika miresaka manodidina ny asa teto amintsika saingy ny manahirana dia tsy ampy ireo toerana entina manomana ireo tanora hiditra amin’ny sehatry ny asa, tsy ampy ny famoronana asa. Tsara hanaovana ezaka manokana mba hialana amin’ilay faka tahaka rehefa mpanao volo no malaza dia manao volo daholo, mandeha ny mofogasy dia lasa mpivarotra mofogasy daholo ny rehetra...
Zava-dehibe tsy tokony hatao ambanin-javatra ny talenta nomen’Andriamanitra na ny vocation. hatramin’ny fampianarana manko eto amintsika dia tratran’izany olana izany, tsy niofana ho mpampianatra fa tsy manan’asa dia manao. Anjaran’ny rehetra no mandinika izay tokony hatao amin’izany fa iankinan’ny fampandrosoana. Tsy kisendrasendra ny fampandrosoana fa mila tetika maty paika tsara raha te hiala amin’izao fahantrana misy antsika izao, ary tsy izay tiana atao no atao fa izay tokony atao.